BEYBLADE BURST app 7.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ BEYBLADE BURST app
BEYBLADE BURST app ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Create, စိတ်ကြိုက်နှင့် BEYBLADE burst App ကိုသင်၌ BEYBLADE burst ထိပ်တိုက်ဖျက်။ ဦးဆောင်, ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုတိုးမြှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိပ်တန်းရွေးချယ်ရေးနှင့်အဆုံးစွန် BEYBLADE မာစတာမှလူသစ်မှတက်မြင့်မှအောင်မြင်မှုများဝင်ငွေများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ multiplayer အွန်လိုင်းပွဲများမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 90 ကျော်တိုင်းပြည်များတွင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်! ပွဲအနိုင်ရနှင့်ကို virtual အပိုင်းပိုင်းသော့ဖွင့်ဖို့ယှဉ်ပြိုင်! အဆိုပါ BEYBLADE burst App ကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိရိယာ BEYBLADE ကွဲ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွမ်းအင်ဆောင်တတ်၏
Battle LEAGUE ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးက LEAGUE CREATE
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ -START တစ်ဦးက LEAGUE: ထိပ်တန်း Blader ၏ခေါင်းစဉ် Multi-ပတ်ပတ်လည်ပြိုင်ပွဲအတွက်, မိဿဟာ Create သင်၏မိတ်ဆွေများဖိတ်ခေါ်နှင့် Battle ။
တစ်ရာသီ -CHOOSE: ရာသီ 1 နေ့၏အလျား, 1 ရက်သတ္တပတ်, ဒါမှမဟုတ် 1 လကိုရွေးချယ်ပါ။
-YOUR SCOREBOARD: တိုက်ပွဲ2အမျိုးမျိုးမှသင်၏မိတ်ဆွေများစိန်ခေါ်နေဖြင့်ရမှတ်ရယူနိုင်သော:
1. DIGITAL Battle ၏အွန်လိုင်းယှဉ်ပြိုင်: သင်၏ Blader ရမှတ်မှရမှတ်ပေါင်းထည့်ကြောင်းဒီဂျစ်တယ်တိုက်ပွဲများမှသင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်။
2. အရည်အချင်းမျက်နှာ-to-Face ကစားစရာ Battle နဲ့အတူ: သင်၏မိတ်ဆွေများကိုရင်ဆိုင်ရ-to-မျက်နှာသင့်ရဲ့ Beyblade နှင့်အတူစစ်ချီထိပ်တန်းကစားစရာကျူးဧသောအသံကို, ထို့နောက်သင့်ရဲ့တိုက်ပွဲလိဂ်သို့ရလဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ!
ပြိုင်ပွဲနေ့အဘို့သင့် LEAGUE -GATHER: 1 နေ့ကရာသီကိုဖန်တီးကာ bracketed ကစားစရာပြိုင်ပွဲပါတီအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ!
BLUETOOTH သော့ဖွင့်ဖို့ BEYBLADE burst စွမ်းအင်အလွှာ -Scan အဆိုပါ BEYBLADE burst app ကိုအတွင်းဒီဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှု enabled ။
-Swipe သင့်ရဲ့ BLUETOOTH enabled BEYBLADE ကွဲအပေါ်ဆုံး၏လှည့်ဖျားလမျးညှနျမှုနဲ့မြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲ left သို့မဟုတ်ညာဘက်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိ
စစ်တိုက်နေစဉ်အတွင်းပါဝါတက် -Charge နှင့်အားကြီးသောနဲတိုက်ခိုက်မှုတိုက်ဖျက်မည်!
BEYBLADE burst Turbo SLINGSHOCK အဆိုပါ Beystadium သံလမ်းမှတဆင့်နှင့် app ထဲမှာတိုက်ပွဲ Ring ကိုသို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိပ် propels တဲ့ရထားလမ်းစနစ်ကပါရှိပါတယ်။
-HEAD-to-HEAD Battle တိုက်ပွဲများ: ပြင်းထန်သောစစ်တိုက်တိုက်ပွဲများအတွက် Faceoff ပါဝါတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် SLINGSHOCK Beystadium အားဖြင့်သင်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ် SLINGSHOCK ထိပ်တန်းဖွင့်ရန် app ထဲမှာအထူး powerup ဆုကြေးငွေများအတွက် rails!
CONTROL RC BLUETOOTH BEYBLADE burst ထိပ် enabled!
BLUETOOTH သီးခြားစီကိုရောင်း BEYBLADE burst ထိပ် enabled ။ ဘာသာစကားအားလုံးသို့မဟုတ်စျေးကွက်များတွင်မရရှိနိုင်သေးပါ။ BEYBLADE burst ™ app ကို select လုပ်ပါက Android ™ devices များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ အပ်ဒိတ်များ Compatibility ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အသေးစိတျနဲ့ device ကိုလိုက်ဖက်မှုအတှကျအ beyblade.hasbro.com စစ်ဆေးပါ။
ဒီ app ကသင်၏ BEYBLADE burst ထုတ်ကုန်အပေါ်ကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်သင့် device ကိုရဲ့ကင်မရာကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကင်မရာကိုဖွင့်ဖို့သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ privacy settings တွေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ RC BLUETOOTH က Android 6.0+ ကိရိယာများပေါ်တွင် BEYBLADE burst ထိပ်ထိန်းချုပ်မှု enabled (က Android OS ကိုလိုအပ်ချက်နှုန်း) တည်နေရာကိုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
အွန်လိုင်းထိုကဲ့သို့သော multiplayer အဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, ဦးဆောင်သူနှင့်တိုးတက်မှုမိတ်ဆွေများကအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ် restore ။ ပထမဦးဆုံးမိဘတစ်ဦးကိုမေးပါ။
- က Android 4.4+
- က Samsung Galaxy S4 ကို +
BEYBLADE BURST app အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BEYBLADE BURST app အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BEYBLADE BURST app အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ron-lawrence စတိုး 4.16k 1.26M
BEYBLADE BURST app ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BEYBLADE BURST app အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.0.1
ထုတ်လုပ်သူ Hasbro Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.hasbro.com/app_esrb_privacy
လက်မှတ် SHA1: AA:52:1B:FD:1C:AB:5A:DA:D6:84:5F:E0:74:49:DC:3B:1E:90:3E:0A
အဖွဲ့အစည်း (O): Hasbro
BEYBLADE BURST app APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ